Alahady faha-4 Fiaviana Taona A - Fihirana Katolika Malagasy
Alahady faha-4 Fiaviana Taona A
Hiara-monina amintsika Andriamanitra.
"Indro ny Virjiny fa hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hatao hoe : "Emanoela", izany hoe amintsika Andriamanitra." (Vak I Izaia 7, 10-14 sy Evanjely Mt 1, 18-24) Io no ivon'ny Fankalazana aroson'ny Fiangonana amintsika amin'ity alahady faha-efatra ity. Ilay Kristy, feno ny Fanahin'Andriamanitra ka nanafaka ny rofy sy namaha ny fatoran'ireo mijaly no ho avy, ary ho zary famantarana ho antsika : famantarana fa eo anivontsika Andriamanitra, Emanoela.
Matoa i Paoly nilaza fa "loza ho azy raha tsy mitory ny Evanjely izy" (1 Kor 9, 16), dia nahatsapa ny herin'ilay Evanjely izay nanokatra ny fon'ny Jentily ho amin'ny finoana (Vakiteny II Rom 1, 1-7), ka irìny sady zary tso-drano koa ho antsika mandray ny fampianarany. Io fiaraha-bana apostolika io no hifampiarahabantsika isaky ny fiaraha-mivavaka.
Fa mampametra-panontaniana ahy hoe : efa antomotra ny Noely. Mirehitra avokoa ireo Labozia efatra nanomanantsika izany : ny Fibebahana, ny finoana, ny fitiavana ary ny fanantenana. Tsara ny manao jery todika ny làlana vita, niantso fibebahana sy fiambenana Matio ny alahady voalohany, satria tsy fantatra izay hiavian'ny Zanak'olona (Mt 24, 37-44); izany fibebahana izany anefa dia mila porofoina amin'ny fiainana andavan'andro : manaova asa mifanahaka amin'ny fibebahanareo, hoy i Joany Batista (Mt 3, 1-12) ny alahady manaraka, ireo no asam-pinoana izay manomana antsika handray ny Batemin'ny Fanahy; izay mandray io Fanahy io dia voairaka hitory fahafahana sy famonjena, hanohy ny asa natombok'i Jesoa, voahiraka hampanjaka ny fitiavana (Mt 11, 2-11); izany fahatsapana ny fanafahana nentin'i Kristy izay no mameno fanantenana ny fo, ka hahatsapana fa tsy mandao antsika Andriamanitra, eo anivontsika mandrakariva izy.
Afaka roa andro ny Noely. Raha fahaterahan'i Jesoa tokoa izany, tsapantsika ve izany fitiavana mitia antsika izany? Aiza no mety hahitantsika an'i Kristy teraka ho antsika? Noely manko dia hafaliana, manambara fa mandova ny fiadanana isika rehefa an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra". Tsy azontsika adinoina fa tsy ho foana ny ady rehefa hirohotra ho any amin'izy Tompo ny Firenena rehetra, ka ho ao an-tranon'ny Andriamanitr'i Jakoba (Iz 2, 1-5). Amin'izay ihany no hotefena ho fangady ny sabatra,  izay manaiky hiasan'ny Fanahy no afaka hiara-miasa, tahaka ny amboadia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, kanefa tsy hifanapotika! (Iz 11, 1-10).
Na sanatria aza, mbola lavitry ny afo ny kitay, tsy ho kivy isika satria "ny tenan'izy Tompo mihitsy no ho avy hamonjy antsika" (Iz 35, 1-6.10). Fanantenana kolokolointsika mandrakariva ao amin'ny vavaka izany, vavaka izay hiezahantsika hitadiavana ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ka handalinantsika ny fifandraisantsika aminy.
 Nambara ny tenany toy izany tamin'i Joany, Evanjely tamin'ny heriny (jereo Mt 11, 2-11)
 Iezahako ny hanao ny lahatsoratra mazava momba ity ho hitanao tsy ho ela fa ny momba ireo dingana ireo dia efa natsidiko eto : courone de l'Avent, amin'ny fizarana faharoa.
 Vakiteny I alahady voalohany (Iz 2, 1-5)
 Vakiteny I alahady II (Iz 11, 1-10)
 Vakiteny voalohany alahady III sy IV ( Iz 35, 1-6.10 ; 7, 10-14)
< Noely 2007 - taona A
Alahady faha-3 Fiaviana Taona A >
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0393 s.] - Hanohana anay